५/७ बर्ष भयो होला म रा’म्रो संग सु’तेको छै’न – ज्योति मगर – Life Nepali
५/७ बर्ष भयो होला म रा’म्रो संग सु’तेको छै’न – ज्योति मगर
काठमाडौ । नेपालमा अहिले मीटु अभियानले चर्चा पाउँदैछ । एकपछि अर्को गर्दै चर्चित व्यक्तिहरु यस प्रकरणमा फस्दैछन् । अहिले पुराना अभिनेता भुवन केसीको नाम चर्चामा रहेको छ । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले केसीमाथि ग म्भीर आ रोप ल गाएकी छिन् । यो बीचमा केसीले कानुनी उपचार खोज्दै भन्दै चेता वनी पनि दिएका छन् । गत वर्ष अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले निर्माता छविराज ओ झामाथि पनि ग म्भीर आ रोप लगाएकी थिइन् ।
तर अहिलेसम्म पनि उक्त घ टनामा कुनै अपडेट आएको छैन । यो बीचमा चर्चित गायिका ज्योती मगरले पनि मुख खोलेकी छिन् । मगरले सामाजिक स ञ्जालमा एउटा स्टाटस लेख्दै आफ्नो मन भित्र धेरै कुराहरु गुम्सिएको बताएकी छिन् । उनले थप आफूले अझै आफूले निन्द्रासँग स म्झौता गर्नुपर्छ होला समेत भनेकी छिन् । ज्योतीले आफू जस्तै नि न्द्रासँग स म्झौता गरिरहेका अन्य मानिसहरुहरुले आफूसँग कुरा शेयर गर्न सक्ने पनि लेखेकी छिन् ।
ज्योतीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको स्टाटस यस्तो छ, ‘५–७ बर्ष भयो होला म राम्रोसँग सुतेको छैन । अस्ति मात्र भारत का एक कुशल अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको जीवन त्याग पश्चात बिभिन्न सामाजिक सञ्जालमा धेरैले भन्नु भयो ‘इफ यु ह्याभ ए प्रोबलम प्लिज टक टु मि, आइ एम विथ यु’ अर्थात ‘यदी तिमीसँग कुनै समस्या छ भने मलाई भन म तिमीसँगै छु ।’
मलाई पनी धेरै कुरा भन्नु मन छ कती धेरै समस्याहरु छन् जो समाधान भैरहेका छैनन् । तर म भन्न सकिराको छैन कतै मेरो समस्या ‘शिल्पा पोखरेल’ को कानको जाली जस्तै फेसबुकमा रैला गर्ने बाटो मात्रै बन्यो भने ? कतै समस्या समाधान हुनुको साटो झन् ठुलो समस्याहरु आयो भने ? सायद मैले मेरो निद्रासँग अझै धेरै स म्झौता गर्नु पर्छ होला । प्यारा प्यारा दिदी बहिनीहरु तपाईहरु पनी म जस्तै निद्रासँग स म्झौता गर्नु भएको छ भने आउनुहोस मेरो इनब क्समा केही दुःख सुखको कुरा गरौ भन्न नसकेका कुरा हरु एक अर्का सँग साटेर बेस्सरी आशु झारौ ।’
Previous महिला र पुरुषले एकअर्कासँग लु’काउनैपर्ने पाँच कुरा ! जानी राखौं !
Next पूर्णिका शाहका प्रेमी सार्वजनिक,आफु भन्दा १० बर्ष जेठा भएपनि आमा हिमानीको पुर्ण साथ